Basa reiyi bvunzo ndere kuratidza induction kutengesa waya yekubatanidza
Midziyo inokurudzirwa yeiyi bvunzo ndeye iyo yakagadziriswa induction heat coil.
DW-UHF-6KW-ini handheld induction heater
Simba: Kusvikira pa0.48 kW
Kupisa: 392 ° F (200 ° C)
Nguva: 1.5 masekondi
Maitiro uye Mhedzisiro:
Iyi induction kutengesa waya yekubatanidza process yakakurumidza asi ichishanda. Iyo unit yakafambiswa pa 985 kHz, chikonzero chekushandisa yakawandisa frequency yaive yekurovera mukati mediki diki remawaya. Maitiro ese kubva pakupisa ari kushandurwa kusvika pakuomesa kwevatengesi kutora 1.5 masekondi. Kare yaimbovesa simbi yaishandiswa kupedzisa basa iri, zvisinei induction kutengesa kwakabvumidzwa kuve nekukurumidza uye kwakanyanya kushanda. Maitiro acho anogona ikozvino kuve otomatiki pamutsara wekereke, nekuti hurongwa hunogona kuvhurwa kure.
Categories Technologies Tags high frequency soldering, High frequency soldering wire, induction soldering, induction soldering wire, induction kutengesa waya chinobatanidza, RF kutengesa muchina, RF kutengesa waya yekubatanidza, waya yemagetsi yekubatanidza Post navigation